काँग्रेसलाई ओलीको आरोपः सहयात्रीलाई अविश्वास गर्ने अनि विरोधीसँग मिल्ने ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
काँग्रेसलाई ओलीको आरोपः सहयात्रीलाई अविश्वास गर्ने अनि विरोधीसँग मिल्ने !
काठमाडौं,९ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतामा देश नै खुशी हुनु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७० औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पहिलो पटक कम्यूनिष्ट पार्टीको सुदृढ बहुमत सहितको सरकार बनेको र दुईवटा ठुला वाम पार्टी एक भएको सन्दर्भमा देशले नै खुशी मनाउनु पर्ने बताए । “हाम्रो एकतामा कम्यूनिष्ट पार्टीले मात्र होइन देशले नै खुशी मनाउनु पर्दछ ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “किनभने यो स्थिरताको सुरुवात हो । देश अघि बढाउने कार्ययोजनाको एकता हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला कम्यूनिष्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय गीत ‘हामी जित्नेछौं एक दिन’ खुब गाउने गरेको प्रसंग निकाल्दै आज कम्यूनिष्टहरुले जितेको दिन भएको बताए । “त्यतीबेला हामी जित्नेछौं एकदिन भन्ने गीत गाउथ्यौं तर आज हामीले जितेका छौं” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “लामो समयसम्म स्वार्थको राजनीति भएर कम्यूनिष्टहरुले जित्न सकेनन् । जब आफ्नो स्वार्थ गौंण र देशको स्वार्थलाई प्रधान मान्ने नेतृत्व आयो तब कम्यूनिष्टले जित्यो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसका केही नेता अझै पनि राजतन्त्र ब्यूताउँने सपना देखिरहेको बताए । “बिगतमा काँग्रेसका कारण प्राप्त उपलब्धीहरु जोगाउन सकिएन । उसको बानी सहयात्रीहरुलाई अविश्वास गर्ने र बिरोधीहरुसँग मिल्ने छ । अहिले पनि त्यो बानी गएको छैन ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले देश विकासका निम्ती राम्रा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
“गान्धारीले आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन् र केही देख्दिन थिइन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “अहिलेका केही केही मानिसले चेतनामा पट्टी बाँधेकोले सरकारको काम देखेका छैनन् ।” अब केही दिनमा आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गतबर्ष जनताले अत्याधिक माग गरेका तर समेट्न नसकिएका मागहरु सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
Previousतारा एयरको विमान दुर्घटना
Nextस्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र दमकल किन्न स्वीकृति प्रदान